Madaxwayne kuxigeenka Maamulka Puntland oo Gaadiid Guddoonsiiyay Maxkamadaha Dangorayo iyo xarfo – Balcad.com Teyteyleey
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Cabdulaahi X. Cumar Camay iyo xubno katirsan Golaha wakiilada Puntland ayaa goob joog ahaa wareejinta Gaadiidkan loou talagaly maxkmadaha xarfo iyo dangoranyo oo ka kala tirsan Gobalada Nugaal iyo Mudug, halka gaariga saddexaadna lagu wareejiyay Wasaaradda amniga.
Maxamed Jaamac oo ah sarkaal ka tirsan Hay’ada DDG oo iyadu gaadiidkan ku warejrisay markii hore Maamulka ayaa si kooban uga war bixiyay ujeeddada ay ugu tala galeen Gawaridaani, sheegayna inay yihiin gawaari loogu shaqaynayo bulshada danyarta ah .
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda Arimaha Diinta iyo Dhaqancelinta Puntland Maxamed Cali Faarax ayaa xusay inay xaadir yihiin wakiilo ka socda degmooyinka lagu wareejinayo iyo Wasaaradda amniguba sigaarana Do you want to save on your inderal purchase and get a quality medicine? Buy it at our store for 0.4 USD and save big! u sheegay in gawaaridan xafiden muddadii ay gacantooda ku jireen hay’ada DDGna uga mahad celyay dadaalkooda .
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar Camay ayaa bogaadiyay hay’ada Gaadiidkan ku deeqday iyo wasaarada cadaalada intaba dardaaranana u jeediyay maamulada lagu wareejiyay gaadiidkaani sigaara u sheegay in layskala xisabtami doono abaalmarina mutaysan doonaan .
Gaadiidkan ayaa lagu wadaa inay si gaar ah ugu adeegaan kiisaska maxkamadeed ee deegaanada reer Guuraaga ah ee ku xeeran deegaanadan